အမျိုးသမီးများနှင့်ကလေးများအတွက် PU Leather Kick Boxing လက်အိတ်များကို - အခမဲ့သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့်အခွန်အကောက်ကင်းဝယ်ပါ WoopShop®
အမျိုးသားအမျိုးသမီးများနှင့်ကလေးများအတွက် PU သားရေလက်ဝှေ့ထိုးလက်အိတ်များ
$28.99 ပုံမှန်စျေးနှုန်း $44.99
အမေရိကန် Size ကို 12 oz 8 oz 10 oz4oz6oz
အရောင် ပန်းရောင် အနီရောငျ ရှေ Black က
12 အောင်စ / ပန်းရောင် 8 အောင်စ / ပန်းရောင် 10 အောင်စ / ပန်းရောင်4အောင်စ / ပန်းရောင်6အောင်စ / ပန်းရောင် 10 အောင်စ / အနီရောင် 10 အောင်စ / ရွှေ 12 အောင်စ / ရွှေ6အောင်စ / ရွှေ 8 အောင်စ / ရွှေ 12 အောင်စ / အနက်ရောင်4အောင်စ / အနီရောင်4အောင်စ / ရွှေ6အောင်စ / အနီရောင် 8 အောင်စ / အနက်ရောင် 8 အောင်စ / အနီရောင် 10 အောင်စ / အနက်ရောင်4အောင်စ / အနက်ရောင်6အောင်စ / အနက်ရောင် 12 အောင်စ / အနီရောင်
PU သားရေ Kick Boxing လက်အိတ် - အမျိုးသမီးများနှင့်ကလေးတွေ - 12 OZ / Pink backordered နှင့်အဖြစ်မကြာမီကြောင့်ပြန်စတော့ရှယ်ယာဖြစ်သကဲ့သို့တင်ပို့ပါလိမ့်မယ်။
အလေးချိန် - တစ်စုံလျှင် 500g
အရွယ်အစား:4OZ၊6OZ, 8 OZ, 10 OZ, 12 OZ
အဘို့ဝတ်စုံ: လူကြီး, အမျိုးသား, အမျိုးသမီး
သက်ဆိုင်သောမြင်ကွင်း - ကရာတေး၊ Muay၊ ထိုင်း / အခမဲ့ရန်ပွဲ / MMA / Sanda / Training Gloves
Size ကိုဇယား: မှတ်စု: 1-2cm တိုင်းတာမှုအားလက်ဖြင့်တိုင်းတာမှုကြောင့်ခွင့်ပြုပါ။ မော်နီတာအမျိုးမျိုးနှင့်အလင်းရောင်အခြေအနေများကြောင့်အရောင်များသည်ဖော်ပြထားသောဓါတ်ပုံများနှင့်အနည်းငယ်ကွာခြားနိုင်သည် အရွယ်အစားရွေးချယ်နည်း
4 OZ - ၃ နှစ်မှ ၃ နှစ်အရွယ်ကလေးများ (အုန်းအကျယ် <3cm နှင့် Palm length <5cm)
6 OZ: 6-11 သက်ကြီးရွယ်အိုများကလေးများ (5-6.5cm နှင့် 13-16cm အကြားအုန်းလက်မအကြား)
8 OZ: 12-15 နှစ်အရွယ် (Palm width) 6.5-7.5cm အကြား နှင့် 15-18cm အကြား Palm အရှည်)
10 OZ: အရွယ်ရောက်ယောက်ျား - မိန်းမ (Palm width) 7.5-8.5cm အကြား နှင့် 16-20cm အကြား Palm အရှည်)
12 OZ - အရွယ်ရောက်ပြီးသူအထီး (Palm width> 8.5cm နှင့် Palm length: 19-22cm)
Спасибо! Перчаткихорошегокачества။ доставкавсрок။ Ещеиподарочкиприложили)
8 အရွယ်ကလေးများအတွက်အရည်အသွေးကောင်း။ ကောင်းစွာချုပ်။ လက်ဆောင်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
သူတို့ကိုရတယ် ပထမ ဦး ဆုံးစှဲအဆင်ပြေပါတယ်။ ငါအသုံးပြုမှုပြီးနောက်အပိုဆောင်းတုံ့ပြန်ချက်ပေးရမည်
Перчаткисупер !!! Прилетелибыстро !!! 11 အရွယ်ရောက်သည့်အရွယ်တွင် 10 အရွယ်အစား။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်продавцузакачественныйтовариподарок!)